Somaliland: Madaxweyne Biixi Muxuu Ka Yadhi Munaasibada Ardayda Dhammaystay Kulliyaddaha Caafimaadka Ee Jaamacadda Edna - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Somaliland: Madaxweyne Biixi Muxuu Ka Yadhi Munaasibada Ardayda Dhammaystay Kulliyaddaha Caafimaadka Ee Jaamacadda Edna
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka qaybgalay munaasibad oo loo sameeyey 341 Arday oo ka qalinjabiyey Jaamacadda Edna Aadan ee Magaaladda Hargeysa, kuwaas oo bartay Caafimaadka.
Munaasibadda qalinjebinta oo lagu qabtay Huteel Maansoor ee magaalada Hargeysa, ayaa waxa madaxweynaha kala qaybgalay xubno kamid ah golaha wasiirrada, xildhibaanno, safiirro, hormuudka kala duwan ee jaamacadda Edna, macallimiinta Ardayda maanta qalinjebisay iyo waalidiintooda iyo marti-sharaf kale.
Madasha, ayaa laga soo jeediyey hadallo lagu bogaadinayo da’yarta cilmiga baratay laguna hogo-tusaalaynayo sidii ay dalkooda iyo dadkoodaba ugaga faa’iidayn lahaayeen aqoontooda.
Aasaasaha, ahna madaxweynaha jaamacadda Edna, Dr. Edna Aadan Ismaaciil oo halkaas khudbad dheer ka jeedisay, ayaa si qoto dheer u sharraxday dedaalka iyo naf-hurnimada ay jaamacad ahaan geliyeen geliyeen Ardayda maanta qalinjebisay.
Marwo Adna waxay hoosta ka xarriiqday inay kalsooni baddan ku qabto aqoonta Ardayda, islamarkaana ay yihiin kuwo isbeddel muuqda bulshadooda ugu horseedi kara bulshadooda, iyadoo ku adkaysay inay noqdaan kuwo qarankooda ilaashada oo feejigan.
Maayarka caasimadda Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge oo munaasibadda ka hadlay, ayaa hambalyeeyey ardayda maanta qalinjebisay, waxana uu ku waaniyey inay dedaalkooda waxbarasho sii labanlaabaan, maankana ku hayaan in mustaqbalkii dalkooda iyo koodiiba uu gacantooda ku jiro.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo Sayniska, Axmed Maxamed Diiriye Toorno, ayaa isaguna bogaadiyey Ardayda qalinjebisay, waxana ku adkeeyey inay yareeyaan ku tiirsanaanta dadka kale, naftooda horumariyaan, aqoonta ay barteenna ku shaqo tagaan.
Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay Ardayda qalinjebisay, ayaa si kal iyo laab ah u hambalyeeyey Ardayda, waalidintooda iyo macallimiintii ku tacabtay, waxana uu kula dardaarmay inay muujiyaan midhaha tacabkii la geliyey, kaalintoodana ka qaataan horumarka qarankooda.
Madaxweynuhu waxa uu quruxda Ardayda qalinjabisay ku tilmaamay mid qaranku ku faani karo, isaga oo bogaadiyey cid kasta oo kaalin ka qaadatay inay kaalintan soo gaadhaan, gaar ahaan Marwo Edna Aadan oo dedaalkaas ku suntan.
“Hambalyo inta qalinjebisay maanta, Hambalyo waalidiinta kusoo tabcay, hambalyo shaqaalaha iyo madaxda jaamacadda, hambalyo wasaaradda Waxbarashada, si gaar ah hambalyo Dr. Edna Aadan Ismaaciil, hambalyo dhammaan qaranka Somaliland ee ay maanta usoo baxeen intan oo mutacallimiin ahi.” Ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweyne Biixi, aaya markaa kaddib shahadooyin iyo abaalmarinno kala duwan ku guddoonsiiyey Ardaydii kaalmaha hore ka gashay kulliyadaha kala duwan ee ay jaamacaddu ka kooban tahay, kuwaas oo bartay qaybaha kala duwan ee caafimaadka.